Ozi ụlọ ọrụ - Shenzhen Simida Intelligent equipment Co., Ltd.
.Lọ > Akụkọ > Akụkọ banyere ụlọ ọrụ
Ojiji nke igwekota ihe nhicha na lithium batrị slurry
Lithium batrị cell slurry akpali bụ inggwakọta na dispersion usoro ke dum mmepụta usoro nke lithium-ion batrị, nke nwere mmetụta na ngwaahịa mma karịa 30%, na bụ ihe kasị mkpa njikọ ke dum mmepụta usoro.
A kpọrọ Smida ka ọ bịa emume ngwụsị afọ nke ụlọ ọrụ ndị ụlọ ọrụ LED teknụzụ dị elu
On December 21st, na 2017 Gaogong ikanam Nzukọ Kwa Afọ · Golden Globe Award Ememme kwadoro site Gaogong ikanam na isiokwu nke "Anwụrụ ọkụ na-ada ada, Asọmpi maka Soft Power, Miri jikọta na ịme ọpịpị New Ohere".
Aka nke Laser akara Machine
Igwe Laser Marking nwere akụkụ ise, ya bụ laser, lens laser, galvanometer, kaadị marking na kọmputa, akụkụ nke shei.
Ngwa anya Fiber tingcha Machine na-adịkwaghị arụmọrụ
Eriri eriri splitter bụ ukwuu oru oma.
Nnyocha nke uru na ọghọm dị na igwe igwe laser
Nke mbụ, laser ọnwụ bụ a na-abụghị ndị na kọntaktị ọnwụ, dị ọcha, mma na mmetọ-free. N'oge laser ọnwụ, na laser isi nke Laser tingcha Machine enweghị kọntaktị na workpiece na e nweghị ngwá ọrụ eyi.
Etu ị ga-esi jigide Centrifuge Automatic
Mgbe ọ bụla ojiji, na-emeghe Automatic orùrù centrifuge mkpuchi na-ekwe ka okpomọkụ ma ọ bụ mmiri ka ikusi ndammana. Ọ bụrụ na ikuku akpaaka na-eji obere ikuku centrifugation eme ihe n'oge gara aga, enwere ike ị nwere ice, yabụ chere ka ice gbazee ma hichaa ya na akwa gauze Clean, wee mechie mkpuchi mgbe enweghị mmiri doro anya.